Fraịde, Ọgọstụ 11, 2006 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
IHE: Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ime nke a, kpachara anya. Google nwere nlebara anya na-akpọ aha na API ha, yabụ kpachara anya ka ị ghara iji aha ndị ọzọ dochie ndị mgbanwe ahụ! Ọ gaghị arụ ọrụ.
Ugbu a, banyere inweta ti ti. Ọ bụrụ na ịgụbeghị Oge Ntinye nke Malcolm Gladwell dere, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịgụ. Achọghị m ka m bibie okwu Mr. Gladwell, mana ọ bụ n'eziokwu na ọ na-ekwu n'eziokwu na, mgbe mgbe, ọ dị ka enwere isi ebe mkpebi anyị na-eme ma ọ bụ na ihe omume ndị na-apụta n'ahịa anyị na ndụ anyị.
Mgbe m tinyere ozi kaadị akwụmụgwọ m iji hazie zụọ m, enwere igbe igbe ọzọ ebe m nwere ike ịkwụ $ 4.99 ka ụlọ ọrụ ahụ wee nwee ike debe ozi ndebanye aha m ma ọ bụrụ na m tufuru ya ma chọọ ịwụnye ma debanye aha ọzọ mmemme. Echere m ya maka nkeji ole na ole… wee lelee igbe ahụ. Echetara m na m ga-ezigara onye na-ere ahịa ọzọ ozi mgbe m furu efu igodo ndebanye maka ngwa ha ma chọọ ịmegharị ya.
Atụrụ m! O yikarịrị ka m gaghị ede ma jụọ ha maka igodo ahụ, mana akwụrụ m $ 4.99 maka mmetụta ahụ na-ekpo ọkụ. Iwe anaghị ewe m iwe - ọ bụ n'ezie ezigbo ego iji kwado ozi m. O juru m anya na ndị ọzọ na-ere ahịa anaghị eme nke a. Nke a bụ ụdị ọnọdụ Gladwell na-ekwu maka ya n'akwụkwọ ya. E reelarị m na sọftụwia ahụ, ha jụrụ m ka m nwetakwu oge m mechara mee. Mma!
Nyocha Calculator Naa
Aug 1, 2007 na 7: 28 AM
Gladwell nwere ike ịme ihe wetara gị ihe ọkụ ọkụ, mana ọ bụ ihe, m, kwesịrị ịbụ akụkụ nke ọrụ ndị ahịa. Ebumnuche ochie nke ime ihe nke ọma ma ndị mmadụ ga-alaghachi ọrụ.
Ugboro abụọ n'ime ihe karịrị afọ 25 nke iji kọmputa, enwere m ịkpọtụrụ onye na-ere ma ọ bụ onye na-eme ngwanrọ maka koodu keycode. Maka ebumnuche na-enweghị isi, koodu ndị ahụ emeghị ya ka ọ bụrụ ebe m na-eto eto nke nọmba serial na ozi ndebanye aha echekwara na nchekwa data echekwara na onye na-eme ihe ọmụma gbasara onwe m nke m ji kemgbe 1992 akpọrọ Oge na Chaos (http://www.chaossoftware.com/ ọ bụrụ na ị nwere mmasị).
Otu n'ime ụlọ ọrụ m kpọtụrụ nyere m koodu m - na-enweghị nsogbu - afọ anọ mgbe mbido mbụ. N'ime afọ anọ ahụ kemgbe azụrụ mbụ, agbanweela m ndị ahịa email, kwalite ha na sistemụ arụmọrụ ọhụrụ, ma azụta m ihe ndị ọzọ n'aka ha. Akụkụ nke "ndekọ ndị ahịa" ụlọ ọrụ ahụ kwesịrị ịnọgide na-enwe bụ ndepụta nke koodu ọ bụrụ na ị, onye ahia chọrọ ha ọzọ.
Nchaji maka ya dị ka ego ọtụtụ ụlọ ọrụ ịnshọransị ugbu a na-anwa ịkwụ ụgwọ mkpuchi ha maka "mma" nke ịnata akwụkwọ or ego eletrọniki (ha abụghị nhọrọ, buru n'uche), yana ego maka "mma" nke ịkwụ ụgwọ site na ego ($ 1.25 ego) ma ọ bụ maka "mma" nke ịkwụ ụgwọ elektrọnik ($ 1.00 ego). Feesgwọ ndị ahụ bụ ihe ọchị, nke kachasị mma, mana na-egosipụta azụmaahịa na-agafe ọnụ ahịa nkịtị nke azụmaahịa ozugbo, yana oke uru.